Waxaan ka digayaa dad jecel ku shubashada dabadeedna shallaaya!! - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Waxaan ka digayaa dad jecel ku shubashada dabadeedna shallaaya!!
January 12, 2019 at 22:03 Waxaan ka digayaa dad jecel ku shubashada dabadeedna shallaaya!!2019-01-12T22:03:05+00:00 WARARKA SOOMAALIYA
Walaahi qof ahaan Diinta islaamka waan jeclahay, Ilaaheey Baan Jeclahay Nabigiisana waan jeclahay, Dadka Soomaaliyeed oo dhana waan jeclahay.
Laakiin waxaan necbanahay, laablakaca aan ka fiirsiga lahayn iyo fudaydka tirada badan.
Kama soo horjeedi in la faafiyo Diinta Islaamka—- La qabto Muxaadarooyin—– Lana wacyigaliyo dadka Soomaaliyeed,
Sidoo kale kama soo horjeedi Sheekha na soo siyaartay ee sheegtay Niyadda iyo Qalbiga waangsan, balse waxaan ka soo horjeedaa, kushubashada, iyo in mar kale Nala Ajaro haddii aan nahay dadka reer Muqdisho.
Dib u raac taariikhda dhaw ee Soomaaliya, adigoo Mahadsan bal soo Xusuuso Muxaadarooyinkii Diiniga ahaa ee lagu qaban jiray meelo ka mid ah Magaalada MUQDISHO ee aan Faafreebka lahayn iyo wixii laga dhaxlay— ee Hoog iyo Ba’ahaa.
Ma rabo in gadaal loo noqdo hadda Iyo Kow laga soo bilaabo iyada oo wax kasta la iska hawl yaraysanayo.
Bilowga hore ayaa haboon in taxadirka iyo feejignaantu timaado, laakiin markii Middidu caloosha ku tagto Tamartu waa u dhamaanaysaa— waxaana lagu soo harayaa Shalaay iyo shalay maxaan uga hortagi waynay iyo sheekhii koowaad waana Ajaray.
Maanta ayay rag rabtaa— ma aha dadkeenu dad Oraganazid ah macnaha Abaabulan, oo taxadar badan Waa Masaakiin Jecel Diintooda Muqadaska ah ——wax kasta oo lagu shubtana run Moodaya.
Sidaas darteed ka hotagga xumaha waxaa looga fadhiyaa dadka Mas’uuliyiinta ah ee xilalaka haaya– iyada oo aan loo dhaqmayn sidii Kuwii shahaado la dirirka loo yaqiin— kaliya waxaa la rabaa wixii shiikh kasta oo cimaamad iyo khamiis noo soo xirta uu sheegayo la tafa tiro marka hore.
Dabadeedna Dhagaha Umadda lagu shubaa wax la isku ogyahay oo aan waxyeelayn Diinta Islaamka, Dhaqanka, Qaranimada Umadda iwm– maadaama dalku uu leeyahay maanta dawlad la jecel yahay oo dadkeeda u turaysa.
Ugu Dambayn Waxaan Ka digayaa Ku shubasho uu hadhaw shalaay ka dambeeyo sida maanta na haysata,,,,,,,,,,Sax.
Waxaa Qoray: Cabdirisaaq Axmed
« XASAN ROOBLE: “Waxaan ka baqeynaa in isku dhac yimaado, anagoo markii horeba qaati ka joognay…”
Maamulka Gobolka Banaadir oo bilaabay tirakoobka Shaqaalaha D/Hoose. »